Qiso Gaaban Oo Cajiib Ah Iyo Feylasuufkii Fashiliyay Tuugadii Qiyaantay Boqorka.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Qiso Gaaban Oo Cajiib Ah Iyo Feylasuufkii Fashiliyay Tuugadii Qiyaantay Boqorka..
Published: January 7, 2017, 6:14 pm
Boqorkii Heri wakhtigii u xukumi jiray “Syracuse”, oo wakhtigan Talyaaniga ah ayaa dahab badan u geeyay nin hawlaha boqorka qaban jiray. Waxaanu ka dalbaday inuu taaj weyn oo qurux badan uga sameeyo.
Laakiin markii uu u keenay Taajka boqorka, waxaa shaki ku dhacay boqorka isagoo ka shakiyay in aanu Taajkani wada ahayn Dahabkii uu u geeyay ee qaybo lacag ahi ku jiraan, taasina waxayna keentay muran.
Aqoonyahankii wakhtigooda ayaa ahaa faylasuufka Archimedes, waxaanu raadiyay inuu arrintan cadeeyo. Maalmo badan ayaa arrinkaasi socday. Laakiin maalin isagoo Archimedes ku maydhanaya xamaamada caamka ee dadka ka dhexeeya ee magaalada Syracuse ayuu aad ugu fiirsaday cadaadiska biyaha xagga sare kaga imanaya ee uu ku maydhanyay.
Isagoo aan is gayn oo aan dharkii xidhan ayuu magaalada dhex maray wuxuuna ku qaylinayay “Urika” Urika” oo ah waan helay. Muxu helay?
Markiiba wuxuu codsaday in loo keeno Taajka, qiyaas macdan iyo lacag ah oo isaga la miisaan ah iyo biyo. Saddexda ayuu mid kasta mar geliyay weelka biyuhu ku jiraan, kadib-na biyihi ayuu miisaamay marka uu ka soo saaro.
Waxa halkaasi uga soo baxay in qiyaasta biyaha ku jira ay ka weyn tahay xadiga dahabka uu ka samaysan yahay Taajku, kana yar tahay xadiga lacagta.
Waxaana cadaatay in Taajku aanu ahayn dahab saafi ah iyo lacag saafi midna, laakiin uu isugu jiro dahab iyo lacag. Taasi oo ah sidii boqorkuba shakiga ka qabay.
Halkaasi ayuu ku qirtay ninkii inuu khiyaamo sameeyay. Waxaana arritan la yidhaahdaa masaladii cilmiga ahayd ee tuugada fashilisay.
Faylasuufkani wuxuu ahaa Archimedes, wuxuu ku dhashay magaalada, “Syracuse”, aabihii wuxuu ahaa mid aqoonta xidigiska aad u yaqaana (astronomer).
Maxaa Ka Mid Ah Arimaha Ka Sugnaaday Rasuulkeena SCW Ee Lagu Soo Jiito Bulshada..
Maxaa ka dhigay Nairobi Caasimada keliya ee Afrika ee maalgashiga Caalamiga ah?